Allgedo.com » Kala dooro Baabi’inta Basharka iyo Badbaadintooda (Tusaale Shaafe Cali Yuusuf)
Kala dooro Baabi’inta Basharka iyo Badbaadintooda (Tusaale Shaafe Cali Yuusuf)
Print here| By: allgedo.com: Tuesday, January 10, 2012 // Jawaabaha waa la xiray
Ka: Cabda Cabdullaahi
Ku: Dhallinyarada Soomaalida
Ujeedo: Kala dooro Baabi’inta Basharka iyo Badbaadintooda (Tusaale Shaafe Cali Yuusuf)
Waxaan ka dhegaystay warkii VOA oo afka Soomaaliga saaka waraysi ay ka qaadeen wiil Soomaali ah oo ay ku sheegeen magaciisa Shaafe Cali Yuusuf, oo 18 jir ah, wiilkaas oo ka badbaadiyay wiil yar oo Swidish ah train marilahaa, maa shaa Allaah. Markay waydiiyeen VOA waxa ku xambaaray inuu naftiisa khatar galiyo si uu u badbaadiyo wiilka yar, isna ku jawaabay “ma arki karo qof hortayda ku dhimanaya” baan waxaan xusuustay kuwa assaagiis ah oo maalin walba u laynaya walaalohood Soomaali, Muslimiin ah si xaq darro ah markaasaan ilmeeyay. Wiilkaasi wuxuu badbaadiyay naf Swidish ah, basharka in la badbaadiyo Islaamku kuma xiro jinsiyad, iskaba daaye noolaha oo dhan buu inoo sheegay Nabigeennii CSS in u naxariisashadooda Janna lagu galo. Waxaan Allaah uga baryayaa Shaafe Cali inuu ka mid noqdo dadka Allaah yiri, macnaha, qofka naf nooleeya waa sidii isagoo basharkii oo dhan nooleeyay qur’aan 5:32. Allaah waxaan uga baryayaa Shaafe iyo dadkii khayrka kusoo barbaariyayba inuu SWT adduun iyo aakhiraba liibaano. Waxaan idin xusuusinayaa isla aayaddu waxay sheegtay in qofka xaq darro ku dila qof kale uu yahay sidii qof basharkii oo dhan laayay!! Shaafe wuxuu sheegay inuu Swiden joogay 4 sano kali ah, sidaas daraadeed yay idiinsoo degdegin wuxuu ku koray Swiden oo nabad ah!
Waxaan ugu yeerayaa dhallinyarada Soomaaliyeed inay tusaale u qaataan Shaafe Cali Yuusuf oo maanta wixii laga bilaabo joojiyaan dadka ay laynayaan una diyaargaroobaan siday ugu gargaari lahaayeen diintooda, dadkooda, dalkooda iyo basharkoo dhan. Haddaad sidaas samaysaan miraha ugu horeeya oo aan wada gurannaa waxay noqonayaan in cadawgu dalkeenna ka baxo sababtoo ah waxaa meesha ka baxaya marmarsiinyihii ay ku joogi lahaayeen. Cadawga waxaa inoo loogay islaynta dadkeenna ee meel kale haka doonina, haddaan joojinno dagaalka dhexdeenna ah cadawgu halhaleel buu u cararayaa. Soomaliya lagumasoo dhiirran jirin maalintii dhallinyara Soomaaliyeed ku heesijireen “SHANTA OO ISWEHESHADAYEY WACNAYDAA CALAN INAY WADAAGAANEY WANAAGSANAYDAA” Ilaahow noosoo celi walaalnimadeennii quruxda badnayd. Hadda waxaa soo baxay kuwa ku heesa “SHANTA OO ISWEERAREY WACNAYDAA CADAW INAY ISU WIIQAANOO WADANKANA LA QAATAAYEY WANAAGSANAYDAA” Ilaahow qalbigooda isu dun, xiqdigana ka dhex saar oo Xaqqa ku hanuuni.
Shaafe Cali Yuusuf wuxuu dareemaya sharaf, wuxuu caddeeyay inuu qof yahay, sababtoo ah qofnimada runta ahi waa inaad wax ku soo kordhinkartid adduunka, siiba qofka muslimka ahi waa kasii xag jiraa. Wuxuu furay albaab oranaya qofka muslimka ahi, siiba Soomaaliga ahi maaha argagixiso iyo burcad badeed ee waa qof geesi ah, naftiisa u hurikaraa badbaadada basharka isagoo aan u eegin wax ka baxsan inay bashar yihiin.
Waxaan waydiinayaa dhallinyarada dadka laaya, waxay dareemaan markay naf ama nafo gowyaan? Ma waxaad dareentaan sharafta uu Shaafe Cali dareemayo mise waxaad dareentaan baqdin, ciriiri iyo diiqad oo dhulkaa idinku yaraada? Waxaan u sheegayaa dhallinyarada noloshu maaha naftaa igu jirta ee waa see u nooshahay? Waxaa la ii sheegay nin dhallinyaro ah oo inta nin kale aano qabiil u dilay ka cararay Soomaaliya, markaasuu raadsha qofkasta oo yimaada hotelkuu ka dagay dalkuu u cararay bal inuu yahay qabiilkuu ninka ka dilay iyo in kale. Naftan xaq darrada lagu dilay qabiil ma leh ee Allaah baa abuurtay, dhiigeeda in xaq darro lagu daadiyana xaaraan ka dhigay. Sidaas daraadeed ogow Allaah kama qarsoomi kartid, Ilaah baana ciriiri galinaya naftaada markaad naf kale xaq darro ku dishid.